Paris Saint-Germain oo Janaayo dalbaneysa Mario Balotelli. - Caasimada Online
Home Warar Paris Saint-Germain oo Janaayo dalbaneysa Mario Balotelli.
Paris Saint-Germain oo Janaayo dalbaneysa Mario Balotelli.
Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarineysa inay Janaayo dalab u dirto weeraryahanka kooxda Manchester City Mario Balotelli.
22 jirkaan ayaa noqday mid aan waaydaan dambe loo dooran booska weerarka ee kooxda Etihad Stadium waxaana ugu dambeysay kulankii ay barbaraha goolal la’aanta ah la dhaafi waayeen West Ham, bilowgii November.
Weeraryahanka ayaa sidoo kale qeyb ka aheyn kulankii sabtida Sky Blue 5-0 kaga talaabsatay Aston Villa, wuxuuna ku seegay dhaawac, isagoo sidoo kale tarabuunka ka daawanaayey kulankii isbuucii lasoo dhaafay ee Tottenham.
“Waxaan u sheegay inuu sababta isagu lahaa, maxaa yeelay si fiican uma uusan shaqeyn sedax maalin,” ayuu Mancini yiri Jimcadii.
“Waxaan u maleynayaa inuu Mario u baahan yahay inuu si adag u shaqeeyo. Hadii uusan ciyaarayahan walba si adag u shaqeyn wey adag tahay inuu u ciyaaro heerkaan. Wixii aad tababarka ku sameysay umbaad u sameyneysaa garoonka, wuxuuna ciyaarayahan walba u baahan yahay inuu isku soo bandhigo xerada tababarka. Markaas ka dib ayuu si wanaagsan u ciyaari karaa inta lagu jiro ciyaarta.”
Shabakada Goal.com ayaa ogaatay in tababare Roberto Mancini uu door bidayo inuu ceshto weeraryahankaan uu 2010kii 29.5 milyan uga soo qaatay Inter Milan.
Si, kastaba, kooxda ay iska leeyihiin maalqabeenada carabta ah, ee ka dhisan Faransiiska ayaa diyaar u ah inay xaliso dhibaatada ay City ku qabto xidigaan ayna dalab u dirto sanada cusub.